ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အချစ်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်း
ကိုယ့်အချစ်နဲ့ အရာရာကို အကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ် .... မဟုတ်ဘူးလား မောင်မျိုးရယ်။
ချစ်ရင် နားလည်ပေးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နားမလည်ပေးတဲ့ အပြင် ခုလို ရှောင်သွားရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုချစ်တဲ့ ယောက်ျားပဲ။ ဖတ်လို့ကောင်းလို့ လာအားပေးပါတယ်။
Htet April Honey said...
ကျနော့်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်း ကို လှည့်ဖျားခဲ့မိတဲ့အတွက် ဒီလောက်တော့ ဒဏ်ရာတွေပေးခဲ့သင့်တာပေါ့ ရိုးသားစွာ မာနကင်းစွာဝန်ခံပါတယ် ကျနော်လည်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါ ။(အကြိုက်ဆုံး စာသားပါပဲ)း)
လုမြောင်ရေ..Comment ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိလောက်အောင်ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြေကွဲခံစားမိပါတယ်။ ကလောင်သွားထက်လိုက်တာနော်။ ..Brabo!!!!
ဟာ,, ကိုမောင်မျိုးက ဒါမျိုးတွေလည်း ရတာပဲ,, "မောင်" ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေး နေရာက ခံစားထားတာ အပီအပြင်ပဲ,, အရေးအသား တကယ်ကောင်းပါ့ ,,ကြိုက်ဧ။်,, နောက်တစ်ခါ ရေးရင် "မ" နေရာက ရေးဗျာ,,, အားပေးချင်လို့ ပါ,,, :)
အရင်ကတော့ စာရေးသူလိုပဲခံစားမိမှာပါ ..
"အချစ်"ဆိုတာကို တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက်
နားလည်မှု ၊ဖေးမကြင်နာမှုတွေလို့ ခံစားမိတယ်ဗျာ ...
သူ ဒီလို ဖုံးကွယ်ထားတာကလည်း မိန်းမတို့ တတ်ထားတဲ့ပညာတစ်မျိုးပေါ့ဗျာ ..
တကယ်ချစ်ရင် တခြားတွေကို လျှော်လိုက်လို့ ရပါတယ် ..
ဒါပေမဲ့ အချစ်စစ်မှန်ရင်တော့ မာနတွေ မပါလာသင့်ဘူးထင်တာပဲလေ ကိုယ့်အမြင်ပါ
သူ့ဖက်က မဖွင့်ဟချင်လောက်အောင် နာကျင်တဲ့
ခံစားချက်တွေကြောင့် (သို့ )တဖက်လူ စိမ်းကားသွားမှာကို မလိုချင်တာကြောင့် (သို့) အခြေအနေအရ တယောက်ထဲနေရတဲ့ ဘ၀မှာ မပြောဖြစ်ခဲ့ မပြောချင် ပြောခွင့် မကြုံခဲ့တာတွေလည်း ရှိနိုင်တာပါပဲ။ မောင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်က အတ္တသမားလို့ ဝေဖန်ချင်ပါတယ်။ ဒီလို ဇာတ်လမ်း
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က ဒီလိုပဲ
လန်တယ် လက်လန်အောင် ကောင်းတယ်
အစအဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အရေးအသားတွေပါဘဲ။ ဒီလို ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ များများရေးစေချင်ပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများက မောင်လို ယောက်ျားတွေ များပါတယ်..
ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ်.. စကားမစပ် စာရေးသူကရော ရှားတဲ့အထဲလား.. များတဲ့အထဲပါသလား :) ??
တစ်မျက်နှာစာ ၀တ္ထုလေး လာဖတ်ပါတယ် မောင်မျိုး။ အရေးအသားလေးက ပြေပြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်။ ကြိုက်၏။
ပာုတ်တယ်နော်... ကိုယ် ချစ်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ မာနကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ စကား အသုံးအနှုန်းတွေကို မိန်းကလေးတွေ ရှောင်ရှားသင့်တယ်။ ဘာ အစွမ်းအစမှ မရှိဘူးတို့၊ ပိုက်ဆံ မရှာနိုင်ဘူးတို့ စသဖြင့်ပေါ့... မပြောသင့်ဘူး။
ဇာတ်လမ်းထဲက ယောက်ျားလေးကို နားလည်ပေးလို့ ရတယ်။ ပာုတ်ပါတယ်။ ဘယ်ယောက်ျားမှ အပျို မပာုတ်တဲ့သူကို လက်မထပ်ချင်ကြဘူး။ သူတို့ကသာ လူပျို ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ သူတို့ လက်ထပ်မယ့် မိန်းကလေးကိုတော့ အပျိုပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။
ရို့စ် ဦးလေး တစ်ယောက် အကြောင်း ပြောပြမယ်။ အဖေ့ရဲ့ညီပါ။ သူက ဆရာဝန်။ ဆရာဝန် ဆိုတော့ စပ်ပာပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း တော်တော် များပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ညီအစ်မတွေချည်း ၅ ယောက်လောက် ရှိတဲ့ မိသားစုက မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ စေ့စပ်တာကို ဦးလေးက လက်ခံခဲ့တယ်။ ရို့စ်တို့ကလည်း ပြောကြတာပေါ့။ ဦးလေးရယ် အဲ့ဒီ ညီအစ်မတွေထဲက အငယ်ဆုံးမလေးက သိပ်လှတယ် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Kate Winslet နဲ့ တူတယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ အသားအရေလေးနဲ့။ ဘာလို့ သူ့ကို မယူတာလဲ ဆိုတော့ သူက အပျို မပာုတ်လို့ပါတဲ့။ အိမ်ထောင်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲ့တော့ မောင်မျိုး ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုလေးက သသာဝ ကျတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ ဘ၀ကို ထင်ပာပ်စေလို့ နှစ်သက်တယ်။
~ မနဲ့မောင် အကြောင်းတွေကို မောင်မျိုးကပြောတယ် ~ အဲလိုပေါ့ :D
မိုက်တယ်ဗျာ တကယ်ပဲ ဖတ်လုိ့အရမ်းကောင်းပါတယ် ဒီနေရာလေး သဘောကျတယ် ..."ကိုယ်မဖန်တီးယူပဲဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်ကို ကိုယ်တိုင်ချေဖျက်ရတာကတော့ ကိုယ်မွေးတဲ့ခလေး ကိုယ်ပြန်သတ်ရသလိုပါပဲ သိပ်ကိုခံရခက်ပါတယ် "
ကြိုက်တယ်ဗျာ အစကတော့ ကိုယ်တွေ့ခံစားချက်များလား ဆိုပြီး ဖတ်လာတာ.. နောက်ပိုင်းမှ ဝတ္ထု ပါလား ဆိုပြီး ကောက်ချက်ချမိတယ်
လာဖတ်သွားပါတယ်။ ကောင်မလေးကို ခွဲထားခဲ့တဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဇာတ်ကောင်ထဲက ကောင်လေးကိုပြောတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မကျေလည်တာက...မ က သူ အီမ်ထောင်ကျဘုးကြောင်းဖွင့်မပြောခဲ့ဘုး ဆိုတဲ့အချက်ပါ...မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူတကယ်ချစ်တဲ့သုတစ်ယောက်ကို ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ ဟာမျိုးအသိမပေးဘဲထားတယ်ဆိုတာ သိပ်တော့သဘာဝမကျဘုးလို့ထင်တယ...်... သူမောင့်ကိုတကယ်ဘဲမချစ်ခဲ့လို့ လား ....၊၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူကြိုတင်ဖွင့်ပြောခဲ့၇င် ...မောင်ကလည်းတကယ်ချစ်ရင် အ၇င်က အီမ်ထောင်ကျဘုးတယ်ဆိုတာ အပြစ်မှမဟုတ်ပဲလေ ...။။ ( just my opinion)
ဒီ ဇာတ်ကောင်ကတော့ အချစ်ကြောင့် မိုက်ရူး မရဲဘူးပေါ့လေ ..း)
တကယ်သာ အဲလိုအဖြစ်မျိုး အပြင်မှာ ရှိရင် သူတို့ ဆုံတွေ့ခြင်းကစပြီး မှားနေခဲ့တာ ဖြစ်လိမ့်မယ် .. ကွဲတာ ဖတ်ရတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး .. :D
တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် ဒါတွေက အလကား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် လို့ မြင်မိတယ်။
ငယ်ရွယ်သူ ၊ မိုက်ရူးရဲသူတွေ အရွယ်မှာတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေကို လက်မခံတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချစ်မှာ ဒါက အရေးအရမ်းမကြီးဘူး ဆိုတာ နောက်တော့ မြင်လာလို့ပါ။ အဓိက က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှု ၊ အနွံတာ ခံနိုင်မှု လို့ပဲ ထင်တယ်။ အခု ပို့စ်မှာတော့ ကောင်လေး စိတ်ထဲမှာက နဂိုကတည်း နားလည်မှု နည်းနေတာကြောင့်လို့ မြင်မိပါတယ်။
မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ) နဲ့ မှားပြီး လာဖတ်မိသလားလို့ အောက်မေ့နေတာ..
အင်း... နောက်ဆုံးမှာ မြစ်က ရေစီးသန်သန်နဲ့ ပင်လယ်တောင် ပြားပြားဝပ်အောင် လှိုင်းထန်ပစ်လိုက် တာကိုး....၊ မြစ် 'နိုင်' သွားတဲ့ ပွဲပေါ့...၊
ဖြောင့်ဖြူးတဲ့ အချစ်တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ အစောကြီးထဲက တစ်ယောက်စီရဲ့ အတိတ်က အဖုအထစ်တွေကို ဖွင့်ပြောထားကြရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါပဲ...။
ဒီလက်ရာကို ကြိုက်တယ် မောင်မျိုး..၊ Carry on...။ :)
မ နဲ့ မောင် ဆိုတာနဲ့ စိတ်ဝင်တစားဖတ်လိုက်တာ၊
မောင် က တကယ်ချစ်တာမှမဟုတ်ပဲ၊
ဟင်.. အဲဒီ “မောင်”က လည်း..
အမှန်ဆို သူ သိသွားရင်တောင် “မ” က ဘာဖြစ်လို့ မပြောသေးတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ သေချာမေးသင့်တာပေါ့.. အခုက လက်ထပ်ပြီးမှ သိတာမှ မဟုတ်ဘဲ.. လက်ထပ်ခါနီးမှ ပြောဖို့ ရည်၇ွယ်ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. သူနဲ့ မတွေ့ခင်က အကြောင်းအရာကိုတော့ ဘယ်လို ပြန်ပြင်လို့ ရပါ့မလဲ.. တကယ်ချစ်ရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်ရင် ပြီးတာပဲလေ.. ချစ်တုန်းကတော့ ချစ်ပြီး နောက်မှ ဦးနှောက်က ခွင့်မပြုဘူးလေး ဘာလေးနဲ့.. အဲလိုလူမျိုးကို မတည့်လိုက်တာ..